काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न ठाउँमा वर्षा
बालबालिकालाई बन्दाबन्दीको असरबाट कसरी जोगाउने ?
खेलकुदमा घट्यो बजेट, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा
जो अम्बरका पनि ‘रत्न’ थिए !
भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
कर केमा बढ्यो के मा घट्यो ?
निजी क्षेत्रकाे प्रतिक्रियाः बजेटले अर्थतन्त्र उस्कान सक्तैन
बजेट अक्षमताको प्रमाणपत्रको दस्तावेजः कांग्रेस
अन्तर्वार्ता/विचार आइतबार, वैशाख २९, २०७६
२५ वैशाखदेखि देशव्यापी जागरण अभियान शुरू गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, “जनतालाई देशको अवस्था बुझाउन जागरण अभियान सञ्चालन गरिएको हो।”
नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियान अहिले किन ?
जागरणको उद्देश्य नै जागृत गराउने हो । कांग्रेसले आफ्नो सन्देश सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति र आम जनतामा पुर्‍याउनका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
१५ वटा उद्देश्यका साथ हामीले देशका सबै जिल्ला र मुलुकबाहिर ३३ वटा देशमा अभियान पुर्‍याउँदै छौं । चरणबद्ध हुने यो अभियान आगामी पुससम्म जारी रहनेछ ।
जागरण अभियानमा के हुन्छ ?
कांग्रेसले देशका हरेक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि त्यसको सञ्चार तल्लो तहसम्म हुन सकेन ।
त्यसबाहेक देशमा जारी भ्रष्टाचार, शान्तिसुरक्षाको गिर्दो अवस्था, महिला र सीमान्तकृतका समस्या, सरकारले गरिरहेको जथाभावी साथै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु कांग्रेसको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हामी यस्तै विषय लिएर जनतामाझ जाँदैछौं ।
अभियानका कति चरण छन् ?
२५ जेठसम्मको पहिलो चरणमा ७७ जिल्लामा खटिएका प्रतिनिधिले जनतामाझ पार्टीको सन्देश राख्नेछन् । दोस्रो चरण २४ भदौदेखि ११ असोजसम्म चल्नेछ । यो अवधिमा ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू हुनेछन् ।
७ पुसमा शुरु भएर १६ पुसमा टुंगिने तेस्रो चरणमा भने ७५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यो अभियानका कार्यक्रमहरूमा पट्यारलाग्दो आसन ग्रहण र धेरै वक्ताले लम्बेतान बोलिरहने जस्ता काम हुने छैनन् ।
तर, अभियानले गति नलिंदै केही जिल्लामा दुई पक्षबीच कुटाकुट भएको छ नि !
एक दुई ठाउँमा भएका घटनालाई समग्र अभियानसँग जोड्न मिल्दैन ।
सिन्धुपाल्चोक लगायत केही ठाउँमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । स्थानीय नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा केही ठाउँमा नहुनुपर्ने घटना भए, यो रोकिन्छ ।
जागरण अभियानसँगै पार्टीभित्रको द्वन्द्व पनि तल्लो तहसम्म जाने भयो, हैन ?
द्वन्द्वमा जीवन्तता हुन्छ, द्वन्द्व विना समाजको विकास प्रक्रिया नै ठप्प हुन्छ । मुख्य कुरो द्वन्द्वको व्यवस्थापन हो, जुन हुन नसक्दा बेलाबेला समस्या देखिन्छ ।
तर, पार्टीभित्र जस्तोसुकै द्वन्द्व भइरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले देशलाई नेतृत्व दिने कामबाट कहिल्यै पछाडि हटेको छैन/हट्ने छैन ।
शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न ठाउँमा वर्षा
शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ बालबालिकालाई बन्दाबन्दीको असरबाट कसरी जोगाउने ?
शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ खेलकुदमा घट्यो बजेट, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा